Tababarka Mashiinka Mihnadaha Aasaasiga ah - GO! DUGSIGA SPECTRUM (BULSHADA TIME / BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
WAXYAABAHA MECHANICS MASKAXDA
(gawaarida - mishiinka)
(WO) MEN AMA STEEL
spectrum School > koorsooyinka our > Dhaqanka & Mechanics > Makiinadaha makaanikada aasaasiga ah
ah tababarka BSO oo buuxa oo dhan Mashiinka Mashiinka (Qalabka) baraan mashiinnada gacanta ama mishiinka kumbiyuutarada lagu xakameeyo si ay u habeeyaan agabyada. Waxaad bilaabi kartaa isku-rogidda, wax-qabashada iyo kala-jajabinta waxaadna baraneysaa inaad isku-dubbarido oo aad burburiso dhismayaasha farsamada. Waxaad sidoo kale baraneysaa sida loola shaqeeyo mashiinada CNC. Waxaad baraneysaa inaad si habboon u shaqeyn karto sawirrada shaqada, falanqaynta shaqada iyo hababka shaqada. Waa mid tababar aad uwanaagsan oo leh maaddooyin guud oo yar. Ujeedada waxay tahay in la helo aqoonta, xirfadaha iyo waayo-aragnimada adoo adeegsanaya saacado badan oo shaqo iyo inta lagu jiro Layli.
ah Qalabka Darajada 2e waxaad baraneysaa farsamooyinka asaasiga ah sida qodista, sawiridda, gadaashka iyo isgaadhsiinta iyo xirfadaha sida alxanka, dhejinta iyo kicinta. Tababarkeena waxaad ka baraneysaa qaliinka iyo dayactirka ee gawaarida (rikoodhka iyo rikoodhada). Waxaad baraneysaa (naqshadeeysaa) inaad gasho, qeexdo xirashada iyo soo sheegida cilladaha. Waxaad u adeegsanaysaa aqoontan asaasiga ah ee ku saabsan dhammaan noocyada qalabka sida robot, crane, tababarka .... Waxaad baraneysaa feylasha iyo / ama farsamaynta (isku xirka iyo isku xirka ...), boodboodka (iskala-jiidka, jarista jarista, silsiladaha ...), farsamooyinka CNC iyo faaqidaadda dusha sare. Waagii hore, aqoonkani waxaa mararka qaar loogu yeeray dhagxan tallaabo oo loogu talagalay xirfad ahaan sidii mugdi-gaaban. Tani waa run, laakiin sababtoo ah isticmaalka degdegga ah ee kombiyuutarrada iyo ICT, waxaan sidoo kale ku tababareynaa inaad la shaqeyso mashiinada CNC.
ah Qalabka Qalabka Machine 3e waxaad u diyaarsan doontaa inaad noqoto qof xirfadle ah / haween ah oo ka shaqeyn kara qalab kala duwan oo leh qalab gacmeed ama kumbiyuutaro lagu xakameyn karo. Tababarkeena waxaad ku tababaran kartaa mashiinnada, talaagada, qalabka alxanka, mastarada iyo mishiinka. Waxaad baranaysaa inaad xirto oo xir nambarka saxda ah iyo alaabadaada, ku rakib xawaaraha tamarta, (de) isku xir oo ku habee qaybaha dhismaha farsamada. Waxa kale oo aad baran doontaa barnaamijyada mashiinnada CNC, isticmaalka barnaamijyada sawirada kombiyuutarka, la shaqeeya xisaabinta xisaabinta kharashka xisaabinta, iwm.
Inta lagu jiro Layli waxaad heleysaa fursad balaadhan oo ah waxa aad taqaanid oo aad ku codsan karto ficil ahaan. Waxaad kaloo dhadhan kartaa xaalada dhabta ah ee shaqada shirkad.
Adigu waad qabsataa
Waxaad xirfad ahaan xirfad u leedahay
Waxaad si sax ah u shaqeeyaan
Ma waxaad xiiseyneysaa buugaagta, mashiinka, laakiin sidoo kale qalabka kumbiyuutarada gacanta lagu xakameeyo? Miyaad sax tahay oo diyaar u tahay inaad wax ka barato ficilka oo aadan u jilicsanayn shaqada jireed?
Waxaad mar walba ku bilaabi kartaa Mashiinka Tababarka, inkastoo aqoonta aasaasiga ah ee biraha iyo farsamada ay hubaal tahay in lagu daro. Hase yeeshee, rabitaanka shaqada iyo barashada ficilku waa mid aad muhiim u ah.
Kooras diyaar ah oo wanaagsan ayaa ah 1 heerka warshadaha.
Kadib shahaadada 3e (Qalabka) qalabka waad heleysaa shahaadada ee Waxbarashada Sare. Hase yeeshee, waad haysataa ma ahan diblooma waxbarasho sare. Sidaas awgeed waxaa lagula talinayaa inaad haysato mid 7e sannadka khaaska ah in la raaco. Dugsigeena waxaad ku takhasusi kartaa aagga Daraasada Awooda Qalabka mashiinka mishiinka kumbiyuutarka. Ka dib markaad hesho Dibloomada waxbarashada dugsiga sare miyaad tahay shaqaale biraha ah waxaadna bilaabi kartaa shaqo goobta ama xitaa bilaabi kartaa ganacsigaaga.
Kala tasho halkan miisaska casharrada ee tababarka BSO Automechanics:
Sannadka 3e ee kooban (38KB, .pdf)
Sannadka 4e ee kooban (38KB, .pdf)
Sannadka 5e ee kooban (38KB, .pdf)
Sannadka 6e ee kooban (38KB, .pdf)